Sina Fantsika sy fatam-baravarana, fantsika simenitra, visy fanendahana tena, fantsika hexagon, staples, fantsika mahitsy, visy fandavahana, visy fanitarana, ozinina sy mpanamboatra fantsika | Boda
Fantsika sy fatam-bolo, fantsika simenitra, visy fanendahana tena, fantsika hexagon, foto-bolo, fantsika mahitsy, visy fandavahana, visy fanitarana, fantsika miolakolaka
Tanjona: fantsika tsy misy loha-fantsika, tsy misy marika ny fantsika aorian'ny fiara. Izy io dia mety amin'ny indostrian'ny haingo Du.
2. fantsika vy vy
Kavina vy fantsika zoro manokana: ny endrika dia novelomina, tsy manam-paharoa, misy vokany haingana, kalitaon'ny injeniera tsara, fampiharana malalaka sy toetra hafa, no vokatra azo soloina amin'ny hoho boribory mahazatra.
Fampiharana: fanamboarana fanaka, sofa, boaty hazo ary vokatra hazo isan-karazany.
4. fantsika vy simenitra
Mitovy amin'ny fantsika boribory ny endriny, ary somary matevina kokoa ny loha. Fa ny fantsika vy vita amin'ny simenitra dia vita amin'ny vy avo lenta, izay manana tombony amin'ny hamafin'ny fihenjana sy fanoherana, ary azo fehezina mivantana amin'ny rindrina vita amin'ny beton sy biriky. Ny famaritana mahazatra dia 7 ~ 35mm.
5. visy hazo
Izy io dia antsoina koa hoe visy hazo. Raha ampitahaina amin'ny fantsika hafa dia mora kokoa ny mitambatra amin'ny hazo. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fampifangaroana metaly sy fitaovana hafa miaraka amina fitaovana hazo.
6. Fantsika manolana
Ny vatan'ny fantsika dia toy ny fihodinana, ny loha dia esorina, ny lakroa na ny teny iray, ary ny eo ambany dia maranitra ambany. Mahery be izy io. Izy io dia mety ho an'ny toerana sasany izay mila hery manantona mafy, toy ny vatasarihana, suspenders valindrihana hazo, sns. Ny famaritana mahazatra dia 50 mm ka hatramin'ny 85 mm.
Izy io dia karazana fantsika misy tendrony maranitra ary malamalama eo afovoany. Mora kokoa ny manambatra sy manamboatra hazo noho ny fantsika hafa. Izy io dia mety indrindra ampiasaina ho toy ny pin rehefa manatevin-daharana ny zana-kazo. Ny fepetra manokana dia 25 ~ 120mm.
Ny vatan'ny fantsika dia manana nify lalina, henjana ary ambany ny vidiny. Izy io dia afaka manambatra faritra vy roa tsara kokoa noho ny hoho hafa. Ampiasaina indrindra amin'ny fampifandraisana sy ny fametahana ireo singa vy, toy ny famokarana varavarana alim-baravarankely sy varavarankely.
9. Fantsika mitifitra
Ny endriny dia mitovy amin'ny an'ny hoho simenitra, saingy voatifitra avy amin'ny basy izy io. Raha ampitahaina, ny fastening fastener dia tsara kokoa ary ara-toekarena kokoa noho ny fananganana tanana. Mandritra izany fotoana izany dia mora kokoa ny manamboatra azy noho ny hoho hafa. Ny fantsika fitifirana dia matetika ampiasaina amin'ny fananganana tetik'asa hazo, toy ny famokarana hazo tsara sy injeniera miatrika hazo.
Izy io dia ampiasaina amin'ny fametahana antontan-taratasy. Matetika vita amin'ny vy na varahina izy io ary nopetahany amina zinc na nickel zinc mba hisorohana ny harafesina.
Misy karazana bolt roa lehibe ampiasaina amin'ny injenieran'ny haingon-trano, izany hoe bolts tafiditra sy baoritra plastika. Izy io dia mety amin'ny karazana rindrina sy rindrina miorina amin'ny rindrina sy ny tany.
12. Hoho mahitsy
Mampiasatra ny fantsika mahitsy: plywood an'ny indostrialy haingon-trano, fivorian'ny tabilao. Ny fantsika vy amin'ny fametahana ny ratana amin'ny indostrian'ny famokarana fanaka: vita amin'ny vy karbonina 45 ා kalitao avo lenta, miaraka amina endrika tsy manam-paharoa, firafitra mirindra ary fisehoana tsara tarehy, dia mety amin'ny fifandraisana hazo kesika.
13. fantsika vy manokana
Fantsika vy manokana: vita amin'ny vy 45 quality avo lenta, manana tanjaka ambony izy ary azo fehezina mivantana amin'ny rindrina biriky tsotra, 260 ᦇ - 280 ᦇ sakana simenitra, silicate ary rafitra hafa. Izy io dia fametrahana tsara indrindra sy fanamboarana fantsika mitaingina soavaly (hoho miendrika U). Tanjona: ampiasaina indrindra izy io hanamboarana harato vy, harato tariby ary tariby mihantona anaty sy ivelany, ary azo ampiasaina hanamboarana tariby vy amin'ny famatahana boaty hazo. Ny fantsika boribory mahazatra dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny fananganana rafitra sy faritra marokoroko, fandrafetana.
1 、 Fampidirana fototra
Ny fantsika dia vy maranitra (matetika vy) ampiasaina amin'ny fanamboarana hazo, sns. Vao tsy ela akory izay, misy basy fantsika elektrika sy basy fantsika entona. Ny fantsika, izay afaka mampiorina ny zavatra, dia mihantona aminy amin'ny alàlan'ny fiovan'ny toetrany sy ny fikororohany.
2 、 Hevitra
Amin'ny injeniera, ny fandrafetana ary ny fanamboarana, ny hoho dia metaly maranitra (mazàna vy) ampiasaina hihazonana hazo sy zavatra hafa amin'ny toerany. Hammer hiditra ao amin'ilay zavatra, misy koa ny basy fantsika elektrika, basy fantsika entona. Ny fantsika, izay afaka mampiorina ny zavatra, dia mihantona aminy amin'ny alàlan'ny fiovan'ny toetrany sy ny fikororohany.
Ny hoho dia manana endrika samihafa noho ny fampiasana isan-karazany. Ny fantsika mahazatra indrindra dia antsoina hoe "fantsika tariby". Ho fanampin'izay, ny anarana mahazatra fantsika dia pin, sary an-drindrina na hoho lohany miolakolaka.
3, fantsika vy manokana
Fantsika vy manokana: vita amin'ny vy 45 quality avo lenta, manana tanjaka ambony izy ary azo fehezina mivantana amin'ny rindrina biriky tsotra, 260 ᦇ - 280 ᦇ sakana simenitra, silicate ary rafitra hafa. Izy io dia fametrahana tsara indrindra sy fanamboarana fantsika mitaingina soavaly (hoho miendrika U). Tanjona: ampiasaina indrindra izy io hanamboarana harato vy, harato tariby ary tariby mihantona anaty sy ivelany, ary azo ampiasaina hanamboarana tariby vy amin'ny famatahana boaty hazo.
Previous: Visy hexagon vy tsy misy vy, bara nify vy, varahina vy tsy misy fangarony, visy tsy mahazatra an'ny T-type, visy hexagon ivelany, visy hexagon anatiny, vy mifono vy
Manaraka: Ny kofehy nylon, ny fatorana, ny fiaretana avo lenta, ny fiarovana ny tontolo iainana fitaovana vaovao, ny fanitarana visy, ny fiparitahana fantsona, ny famaritana isan-karazany ny fatorana
Vy vy hexagon vy, vy vy ...
Manitatra fantsika amin'ny visy, fanitarana plastika ...
Famatorana nylon, kofehy, fiaretana avo, tontolo iainana ...